နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home News Breaking News နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: မေ 09, 2018 In: Breaking News, Chairperson, NewsNo Comments
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန် ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး၊ နယ်စပ်ဒေသများလုံခြုံရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စရပ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ရဲအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးရေး၊ ရဲကွပ်ကဲမှုဗဟိုဌာနတည်ထောင်နိုင်ရေး၊ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန်နှင့် ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟုန်လျန် လည်း တက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ ပွညျသူ့လုံခွုံရေးဝနျကွီး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့သညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ ပွညျသူ့လုံခွုံရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Zhao Kezhi ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ အား ယနနေံ့နကျ ၁၁ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော သံတမနျဆောငျဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ ဆှမြေိုးပေါကျဖျောဆကျဆံရေးမှတဈဆငျ့ ဘကျစုံမဟာဗြူဟာမွောကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မိတျဖကျဆကျဆံရေး၊ နယျစပျဒသေမြားလုံခွုံရေး၊ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီးနှိမျနငျးရေး၊ လူကုနျကူးမှုတားဆီးကာကှယျရေး၊ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးကိစ်စရပျမြားတှငျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးအတှကျ လိုအပျသညျ့ ရဲအသုံးအဆောငျပစ်စညျးကိရိယာမြား ကူညီ ထောကျပံ့ပေးရေး၊ ရဲကှပျကဲမှုဗဟိုဌာနတညျထောငျနိုငျရေး၊တရုတျ-မွနျမာ စီးပှားရေးစင်ျကွနျနှငျ့ ကြောကျဖွူစီမံကိနျးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့အတူ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးကြျောဆှေ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ သမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးမငျးသူနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွပွီး ဧညျ့သညျတျော တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ ပွညျသူ့လုံခွုံရေးဝနျကွီး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး မစ်စတာ ဟုနျလနျြ လညျး တကျရောကျသညျ။